Fihafanan'ny tany - Wikipedia
Ny fihafanan'ny tany dia fiakaran'ny hafanan'ny Tany. 0,74°C mafana kokoa noho ny tamin'ny 150 taona lasa ny mari-pana ankehitriny. 
Ny mahatonga izany dia fitomboan'ny tahan'ny diôksida karbônina ao amin'ny soson-drivotra iainana, araka ny nambaran' Svante Arrhenius efa zato taona laza izay. Rehefa mampiasa angovo fôsily toa ny arin-tany na ny solitany ny olona dia mampitombo ny tahan'ny diôksida karbônina amin'ny soson-drivotra iainana. Mitombo ihany koa ny taha rehefa aringana ny ala, satria manala ny diôksida karbônina amin'ny soson-drivotra ny zavamaniry.
Rehefa miakatra ny hafanan'ny Tany dia miakatra araka izany koa ny haavon-dranomasina. Ny anton'izany dia ny fiitaran'ny ranoka rehefa hafanaina. Ny fiakaran'ny haavon-dranomasina dia hahatondra-drano ireo tanàna amin'ny morontsiraka. Hiova hany koa ny toetrandro toa ny habetsaky ny orana na ny oram-panala. Hiitatra ihany koa ny tanimaty. Hafana hatrany ireo velarana nangatsiaka. Ho betsaka kokoa ireo rivo-doza ary mety ho kely kokoa ny vokatry ny tanim-boly.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fihafanan%27ny_tany&oldid=1042650"
Voaova farany tamin'ny 30 Desambra 2021 amin'ny 13:30 ity pejy ity.